Golaha Shacabka oo laga mamnuucay in dib loo hor keeno war-bixinta Guddiga Maaliyadda ee Miisaaniyadda 2018-ka – Kalfadhi
Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa ka mamnuucay in dib Golaha loo dhex keeno war-bixintii ay Guddiga Maaliyaddu uga hadlayeen Miisaaniyadda 2018-ka, taas oo muujineysay in ugu yaraan lacag dhan $40 milyan la la’yahay halka ay ka baxday. Cawid waxa uu sheegay inaan war-bixintaas loo soo marin hab-raaca Xeerka Golaha. “ War-bixintaan hab-raac sax ah lama soo marsiin. Xeerkaan halkaas ayaa looga gudbayaa, dib dambana looma keeni karo Golaha” ayuu yiri Guddoomiye Cawad.
Kadib dood adag oo kulankii Golaha ee maanta ku dhex martay Xildhibaanada iyo Wasiirada Wasaaradda Maaliyadda ayuu Guddoomiye Cawada siiyey raali gelin Wasaaradda Maaliyadda, isaga oo yiri “Waxaan raali-gelin ka bixinaynaa in Golaha la keenay xeer ama howl aan lala wadaagin Guddiga Joogtada ah iyo Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana raali-galin ka bixinaynaa hadii qalad naga dhacay”. Isaga oo sii adkeynaya raali-gelintaas ayuu Guddoomiye Cawad yiri “Baarlamaanku masheegin in la lunsaday $40 milyan. Waxaan ka siinaynaa raali-galin shacabka iyo Wasaaradda Maaliyada”
Xildhibaanada ku jira Guddiga Maaliyadda ayaa hadal ahaan isku weeraray kulanka. 10 ka mid ah Xildhibaanada Guddigaas ayaa Shir-Guddoonka u gudbiyey ineysan waxba ka ogeen war-bixinta, ayna u arkaan ineysan sharci ahayn. Xildhibaan Cali Xoosh, oo ka tirsan Guddiga Maaliyadda, ayaa yiri “war-bixintaan waa mid laga soo hormariyay waqtigeeda, waxaana la doonayaa in lagu carqaladeeyo shaqada quruxda badan ee maaliyadda, waxayna dhabar jab ku tahay hankii laga lahaa cafinta daymaha Soomaaliya. Waxaan codsanaynaa in raali-galin laga bixiyo, cid saxiixdayna majirtoo waa been abuur”.
Warkaas waxaa qoonsaday Xildhibaan Cabdulaahi Macalin Nuur oo yiri “waxaa ceeb ah in xildhibaanada war-bixinta wax ka qoray ay yiraahdaan ma joogin, waana in ay ilaaliyaan sharaafkooda. Xildhibaanada Baarlamanka qaar haddii ay la xumaatay inta ha ka sheegaan, oo ha dhahaan waan ka noqonay. Waxaana ognahay ololaha balaaran oo ay Xulumaddu ugu jirto in ay arrintaan hor istaagto”.
Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa yiri “waxaan ku faraxsanahay in xildhibaanada halkaan ka hadlay aysan dhihin war-bixintu waa qaldan tahay, laakiin ay leeyihiin sida loo maraa qaldan, waxaana u baahanay in uu halkaan yimaado xildhibaanka qaba in ay qalad tahay. Aniga waxaan qiraa in dadka meeshaan fadhiya qaarkood ay joogeen marka sharcigaan uu Guddigu baarayey, kana shaqaynayay.
Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa si qayaxan u diiday eeddaas, waxa uuna sheegay in shaqsiyaad uu u diiday inuu u fuliyo mashruuc uusan sheegin waxa uu yahay ay ku haystaan shaqada. “Waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli” ayuu yiri Wasiir Beyle. Isagoo ka jawaabaya su’aasha ah halka ay ka baxday lacagtii $50-ka milyan ahayd ee Sacuudiga ka timid ayuu Wasiir Beyle yiri “Sacuudiga waxaa ka yimid $50 milyan, kumana soo dhicin Bangiga Soomaaliya; waxay ku dhacday akoon ku yaala Turkiga, halkaas ayaana laga maamulaa”.
Wasiiru Dowlaha Maaliyadda, Xildhibaan Maxamuud Xayir, ayaa yiri “koox yar oo ka mid ah Guddiga Maaliyadda ayaa sameeyey been-abuur, iyagoo dano gaar ah leh. Waxaan ku shaqaynaa hishiis caalamiya, oo ah Soomaaliyeey gacmihiina nadiifiya haddii aad rabtaan in la idin aamino, oo lacagaha la idinka cafiyo. Waxaan haynaa war-bixinadii nalugu amaanay ee Hay’addaha Caalamiga ah, laakiin waxaa muuqata in dadka qaar aysan u muuqan arrintaas”.
Xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa in, lacag ay Soomaaliya leedahay oo loo soo gacan geliyey, ay ku jirto akoon dibadda ah ku tilmaamay sharci darro, waxa uuna yiri “uma jawaabayo Wasiirada caytamay, laakiin waxaan layaabay lacagta aan weynay ee la sheegay in ay dalka dibadiisa taalo, waana qalad in lacag ka maqnaato Bangiga dhexe 24 saac kabadan”. Xildhibaanku waxa uu sida ay Golaha wax uga socdaan ku tilmaamay “shineemo” isagoo yiri “Baarlamaanka maanta waxa uu noqday shineemo oo kale, waliba iyadoo ay meesha fadhiyaan oo ay sacbinayaan dadkii lunsaday hantida dadka”.
Guddoomiye Kuxigeenka Bangiga Soomaaliya, Maryan Cabdullaahi Yuusuf, ayaa Golaha ka hor faahfaahisay $50-ka milyan ee Sacuudiga laga helay, waxayna tiri “$50-ka milyan Wasiirka Maaliyada ayaa nagu amray in aan $10 milyan ku wareejino dowladda bishii Oktoobar, Wasiirka ayaa haddana na amray bishii Nofeembar inaan bixino $6 milyan, waana dhiibnay, $4 milyan ayuu haddana naga qaaday, $10 milyan ayaan haddana u dhiibnay Wasiirka, waana $30 milyan. Wasiirka Maaliyada ayaa nagu war galiyay in aanan la taaban karin lacagta $20-ka milyan ah ee hartay, laakiin intuu soo laabtay ayuu naga qaaday $5 milyan, waxa uuna yiri ma habooneyn ee waa loo baahday. Hadda waxaan haynaa $15 milyan iyo lacag kale oo mashaariic loogu talagalay”.
10 Xildhibaan oo waxba kama jiraan ku tilmaantay War-bixinta Guddiga Maaliyadda ee Miisaaniyadda 2018-ka